Sọpụrụ Ikike M | Martech Zone
Kwanyere Ikike M .gwù
Afọ ole na ole gara aga, akwụsịrị m ịchọ ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ. Anaghị m ekwu na ịsị na achọghị m ịga n'ihu na-eso ụzọ, naanị ihe m na-ekwu bụ na m kwụsịrị ile anya. Akwụsịrị m ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi n'ịntanetị. M kwụsịrị izere esemokwu. Akwụsịrị m ijide onwe m mgbe m nwere echiche siri ike. Amalitere m ikwesị ntụkwasị obi na nkwenkwe m ma na-elekwasị anya n'inye netwọk m uru.
Nke a emeghị na ndị na-ege m ntị na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ mere na azụmahịa m. Ndị enyi, ndị ahịa, ndị mmekọ… M wee pụọ n'ebe ọtụtụ mmadụ nọ. Enwere m ụfọdụ ndị enyi, ọtụtụ ndị Fans, na ọtụtụ ndị na - eso ụzọ - ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-aga n'ihu. Naanị n'abalị ọzọ a gwara m na anaghị m abụ obodo na Facebook ma ọ bụ ajụghị jụụ. M na-eme ka onye ahụ mara na ha nwere ike ịkwụsị iso m n’oge ọ bụla.
Nke bụ́ eziokwu bụ na achọghị m ime ka onye ọzọ, agaghị m achọ iduhie ndị mmadụ ka ha soro m. Anaghị m eso ndị ọzọ m na-ele na-eme ka obi jụrụ ha. Ha bụ Vanilla… na-amasị m Rocky Road.
Ndị mmadụ na-agwakọta ịkwanyere ugwu na ikike ugwu dịka ikike na obi jụụ. Achọghị m itinye mgbalị ịbụ-ike, Achọrọ m ịbụ omiiko na-eme ihe n'eziokwu. N’ebe m na-arụ ọrụ, achọghị m ka ndị ga-asị ee m nọrọ… M na-asọpụrụ ndị mmadụ karịa mgbe ha kwụsịrị ịgba egwu na ịgwa m hoo haa ihe m kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ka m chụpụ gị n'ọnụ ụzọ, bụrụ onye na-eme ihe ike ma ọ bụ onye na-adịghị eguzosi ike n'ihe. Enweghị ohere ọ bụla.
M chee echiche banyere ndị m na-asọpụrụ n’ onlinentanet, o nwere ihe jikọrọ ha. Nke a bụ ole na ole n’elu isi m:
Seth Chinekein - Onweghi ihe na - egbochi Seth ikwupụta uche ya. Ahụrụ m ya ka ọ na-emeso onye ofufe na-ekwo ekwo otu mgbe ọ na-ese eriri na ájá ma ghara ikwe ka ọ gafere.
Guy kawasaki - ihe dị ka afọ 6 gara aga, emere m okwu amamihe banyere ịnyịnya ibu Guy's team of folks tweeting for him. O gbaghaara ozigbo ozigbo ma mee ka o doo anya onye n’azụ keyboard ahụ.
Gary Vaynerchuk - transperent, unapologetic na na ihu gị - Gary mgbe niile na-agwa ndị na-ege ya ntị ihe ha kwesịrị ịnụ.
Jason Falls - E nweghị ịkwụsị Jason. Oge.
Nichole Kelly - Nwanyị a bụ n'elu… transperent, na-akpa ọchị dị ka hel, na - ọzọ - anaghị ejide azụ.
Chris Abraham - Ekwenyesiri m ike na mụ na Chris nwere otu mmeghachi omume ahụ mgbe ọ bụla anyị hụrụ ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye nke ọzọ dere. Ọ naghị azụ azụ ma ọ na-enwe obi eziokwu ma nwee mmụọ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ndị a dị ka m (amaara m n'ezie na ụfọdụ n'ime ha na-eleda ndọrọ ndọrọ ọchịchị m anya). Ma ọ dịghị mkpa n'ihi na m na-asọpụrụ ikike ha. Amaara m na mgbe m chọrọ azịza ziri ezi, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị na-agaghị anwụrụ anwụrụ ọkụ. Ha agaghi ekwu okwu… ha ga-ekwu ya.
N'ime afọ ole na ole gara aga, amụtara m na onye ahịa nwere obi ụtọ adịghị na-arapara mgbe niile. Onye ahịa nke na-enweta nsonaazụ dị mma, agbanyeghị, na-arapara mgbe niile. Ọrụ m abụghị ịbụ enyi nke ndị ahịa, ọ bụ ime ọrụ m. Nke ahụ na-achọ mgbe ụfọdụ ka m nye ha ọnyà mgbe a na-eme mkpebi ndị na-adịghị mma. Nyere nhọrọ nke ịchọ nkwanye ugwu na ịchọpụta nsonaazụ MA ọ bụ imejọ azụmaahịa onye ahịa m ma mee ka ha gbaa anyị ọkụ - Aga m enye ha akụkọ ọjọọ ahụ mgbe niile.
O wutere m na mgbasa ozi mgbasa ozi? Ọ dabere n'ihe ị bu n'uche na-afụ ụfụ. Ọ bụrụ n 'ịlele ihe ịga nke ọma gị bụ nke ndị na-akwado ya na ndị na-eso ụzọ - ee ee. Anaghị m atụ ihe ịga nke ọma n'ụzọ a, n'agbanyeghị. Ana m atụ ya site na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ndị anyị nyeere aka, ọnụọgụ nke ndụmọdụ anyị na-anata site n'okwu ọnụ, ọnụọgụ ndị mmadụ na-arịgo iji kelee m mgbe okwu gachara, ọnụọgụ kaadị ekele na-agbanye na mgbidi anyị arụ ọrụ (anyị nwere nke ọ bụla!) na ọnụ ọgụgụ nke ndị rapaara m ruo ọtụtụ afọ.
Nkwanye ugwu na ikike adighi acho nkweko ma obu ikike. Enwere m nnukwu ndị ahịa, nnukwu ndị ọrụ, nnukwu ndị na-agụ akwụkwọ, yana ndị enyi, ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ m chọrọ maka ndụ m niile.
Na-agwa ndị na-ege gị ntị eziokwu. Nke ahụ bụ naanị ụzọ iji bụrụ eziokwu nye onwe gị.
PS: Ọ bụrụ na ị na-eche onye m anaghị asọpụrụ n'ịntanetị… ndepụta ahụ toro ogologo. Ugbu a, n'elu ndepụta m bụ Matt Cutts. Ọ bụ ihe ọ bụla onye… M nnọọ ike iguzo ya ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi, jiri nlezianya tụrụ, scripted Ibọrọ gabigara n'ozuzu ajụjụ. Ajuola m Matt ọtụtụ ajụjụ a kapịrị ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ mana, o doro anya na akara akara Klout m ezughị oke ka ọ zaghachi. M na-ahụ ya ka ya na onye na-akparịta ụka. Ikekwe ọ bụ ihe m kwuru… Amaghị m na achọghị m ịma.
Tinye na ndepụta a onye ọ bụla na-aga n'ihu na-ese foto nke onwe ha ịkekọrịta ụbọchị niile ma ọ bụ na-ekwu maka onwe ha na onye nke atọ. Ọ bụrụ na ha kekọtara onwe ha ọnụego ha, achọrọ m ịtụ ha akpịrị. Naanị kwuo.
Tags: chris abrahamgary vaynerchukGuy kawasakijason daranichole kellyseth godin
Etu esi bulite ndi mmadu na-ege ntị elu ma nweta nzaghachi
Ntughari Uzo Ndi mmadu site na UserTesting.com
Ga nke ọma
Jun 7, 2013 na 1: 42 PM
Ekwesịrị m ịsị na post gị nyere m mmụọ nsọ - ma ọ dịkarịa ala iji kpalie nzaghachi. N'ezie - bụrụ eziokwu nye onwe gị. Ọ bụ naanị ya ka ọrụ gị ga-atọ gị ụtọ. Naanị otu ihe nke gbagwojuru m anya n'agbanyeghị na ọ dabara na njedebe. Don'tchọghị ndị na-ekwu oke nke ha. Ọchịchọ. M na-eteta ụra n'oge na-adịghị anya site na iji echiche miri emi ma ọ bụ abụọ, ụfọdụ n'ime ha na-akpali m n'ezie. Ugbu a amatala m na ndị ọzọ nwere ike ghara ịda mba, mana m ga-achọ ịnụ ihe dị ha n'obi, karịa ịgụ ihe ndị ndị ọzọ na-emegharịrị (nke a na-akpọkarị ndị ama ama). Naanị echiche m.
Jun 7, 2013 na 2: 46 PM
Hi @ ihe ịga nke ọma: disqus. Anaghị m emegide nnukwu folks 'inwe' ruturu… ọ bụ naanị mgbe ha biputere ọnụego, na-ekwu okwu, na aha ha na ya ka ndị ọzọ kerịta. O yiri ka ọ bụ ntakịrị narcissistic - naanị echiche m. Nwere ike ihota m na nke ahụ 😉
Mmanụ a Tanụ Tan
Jun 8, 2013 na 4: 47 PM
“Achọghị m itinye mgbam-aka ike ịdị na-eme ụdị ihe ahụ, achọrọ m ịbụ onye na-anụ ọkụ n'obi na onye na-eme ihe n'eziokwu. ”
Ahụrụ m nke a n'anya, mụ onwe m. Anọgidere m na-agụ isiokwu na-atụ aro ịdị mma nke ndị na-ege ntị karịa ọtụtụ. Ọ dị ka ọtụtụ ndị nwere ihe ịga nke ọma na-enweta na enwere ndị mmadụ maka ha ma na-arapara n'ahụ ha kama ịnwa ime ihe na-atọ mmadụ niile ụtọ. Akwa post.